UF ၀ င်ခွင့်ရုံးကိုသူတို့၏အရူးဖြစ်သောပုံပြင်များကိုမေးမြန်းခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
UF ၀ င်ခွင့်ရုံးကိုသူတို့၏အရူးဖြစ်သောပုံပြင်များကိုမေးမြန်းခဲ့သည်
Union Drive သည်လူစည်ကားသောလမ်းကြောင်းများနှင့်အုတ်အဆောက်အအုံများကိုဖုံးလွှမ်းထားသောအထူးလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုမှာ Criser Hall ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိသော ၀ န်ထမ်းများကအကောင်းဆုံးနှင့်အတောက်ပဆုံး UF ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလေးထားကြသည်။
UT ၏ ၀ င်ခွင့်ရုံးတွင် ၁၂ နှစ်ကျော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Shannon Murphy နှင့်ဒီ Tab ကစကားပြောခဲ့သည်။ ယခင် Gator သည်သူမ၏ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရသောရုံးနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ခွင့်ပြုချက်မရရှိပြီးနောက်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး အားရုံးသို့လိမ္မော်ရောင်နှင့်အပြာရောင်ခြယ်ထားသောသစ်သားကုလားထိုင်တစ်ခုသို့ပို့လိုက်သည်
ဒါဟာ UF မှာနေရာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ထိုင်ခုံလုပ်ကပြောသည်တဲ့မှတ်စုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်သေတ္တာထဲ၌လာပြီးစာတိုက်၌ဖွင့်သောအခါ၎င်းကို ၀ န်ထမ်းများထံသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ Murphy က“ ကျောင်းသားကဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
သူမကဆက်ပြောတယ်။ တက္ကသိုလ်ကလက်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးတင်းကြပ်တယ်။ ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ အာကာသအမှန်တကယ်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ကျောင်းသားနောက်ဆုံးမှာ, ဝန်ခံချက်မရခဲ့ပေ။ Eh, ထို့နောက် ‘Noles သွား?
တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုယ်ပိုင် Wheaties သီးနှံသေတ္တာကိုလုပ်ပြီးရုံးခန်းကိုပို့လိုက်တယ်
Murphy ကဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမထုတ်ပြန်ခင်ကပေးပို့ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Murphy ကပြောကြားသည်မှာ box ၏နောက်ကျောသည်ကျောင်းသား၏အောင်မြင်မှုများကိုဖော်ပြပြီးပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
လျှောက်လွှာများကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်မပြုလုပ်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာနှင့်အတူပန်းချီကားများအတွက်ပို့
သူကဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် Murphy ကသူမရုံးမှာဆက်နေတုန်းပဲ။
အဆိုပါ Kardashian ညီအစ်မတွေရဲ့အသက်အကြီးဆုံးထွက်သောသူသည်
လျှောက်ထားသူတစ် ဦး သည် ၀ င်ခွင့်အရာရှိ၏ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင်ရပ်။ “ ငါ့ကိုတောင်းပန်ပါ၊
အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်နေသောရုပ်တုတစ်ခုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အပြင်ဘက်ဝင်းဝင်းနံရံတွင်တန်းစီထားသည့် ၀ င်ခွင့်အရာရှိများ၏ပြတင်းပေါက်များ။ စွပ်စွဲချက်အရကျောင်းသားသည်ထိုareaရိယာကိုနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူတက်သွားခဲ့သည်။ နောက်တကြိမ်သင်သည် Turlington တွင်ဆိုင်းဘုတ်များရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းလျှင်၎င်းသည် Criser Hall တွင်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။
မာဖီကလက်ခံရရှိရန်သေချာသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါဟာသေချာပေါက်အားပေးအားမြှောက်ရဲ့အရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။
ယေဘူယျအားဖြင့်အရာများကိုလက်ခံခြင်းသည်မာဖီကအတော်လေးရှားပါးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျောင်းသားများသည်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြသည့်ကျောင်းသားများနှင့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ရံဖန်ရံခါမိသားစုများသည်အရာရှိတစ် ဦး နှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောရန်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရုံးသို့ကားမောင်းသွားနိုင်သည်။
လူတွေတကယ်ဒေါသထွက်ရင်တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ကစားပွဲခုံမှာအော်ကြလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်လူတွေကဒေါသထက်ပိုပြီးစိတ်ဆိုးကြတယ်။ ငါကလူကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောသောအခါသူတို့သည်ငါတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့အတွက်ရကူညီလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကယ့်ကိုအမျက်ဒေါသပရောဂျက်မထားဘူး။ များစွာသောအရာရှိများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအယူခံဝင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်းမာဖီကအယူခံ ၅% အောက်သာအမှန်တကယ်အောင်မြင်သည်ဟုဆိုသည်။
ဤကျောင်းသားများသည်သူတို့၏လမ်းများတွင်အတော်လေး ~ အပိုပါသော်လည်းသူတို့၏ပုံပြင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်အမင်းသတိရနေသည့်အချိန်ကိုသတိရစေသည်။ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း၏အဆုံးအဖြတ်သည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်သော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းဘို့သို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသူတို့အားကံကောင်းပါစေ။ သင်လိုချင်သောတုံ့ပြန်မှုမရလျှင်? ကောင်းပြီ, သင်အမြဲအရူးတစ်ခုခုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အခြားဘာမျှမပါလျှင်, ဒါကြောင့်အကောင်းတစ် ဦး ပုံပြင်အဘို့ပါလိမ့်မယ်။